Anya maka n'èzí egwuregwu PVC egwuregwu na-ewu-News-Topflor China amachi
Echiche:14 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
N'ihi oke ikuku dị n'èzí na ihu ogologo oge na anwụ na mmiri ozuzo, enwere ọtụtụ ihe achọrọ maka ihe akụrụngwa a na-ete n'èzí. Yabụ kedu ihe iji kpachara anya maka ịtọgbọ ụlọ egwuregwu PVC n’èzí?
1. Tupu owuwu: nyochaa ala ntọala ala. Nyocha na ọgwụgwọ ala bụ otu n'ime njikọ dị mkpa n'ịgbasa egwuregwu egwuregwu PVC n'èzí. Typesdị ala ndị ahụ dị mgbagwoju anya na njikwa ga-akpachara anya. Achọrọ ka isi ntọala niile sie ike, dị nro, dị ọcha, akọrọ, wdg, iji wepu irighiri ahihia niile nke ga-emetụta mmetụta njikọta nke nrapado akụrụngwa abụọ, ọ chọkwara na ala ntọala ahụ enweghị usoro nkwarụ. Iji
1. Maka owuwu nke PVC ala dị n'èzí, enweghị nsogbu nke ihe mgbakwasị ụkwụ kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 2 mm n'ime usoro nke onye na-achị 2 mita, ma ọ bụghị na a ga-eji nhazi onwe onye kwesịrị ekwesị maka ọkwa (biko soro usoro nhazi onwe onye usoro owuwu na nlezianya oru oru iwu)
Ike nke ntọala ala ekwesịghị ịdị ala karịa ihe achọrọ nke ihe siri ike C-20, ma ọ bụghị nke ahụ kwesịrị ekwesị ịkwado onwe onye kwesịrị iji mee ka ike ahụ dị ike;
3. Jiri ihe nyocha nke ihe omimi mmiri iji chọpụta ihe omimi mmiri nke ala ala, na mmiri nke mmiri kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 2%;
4. Jiri onye na-agba mbọ ike ịchọpụta na ịdị elu nke ala nke ala ahụ abụghị ihe na-erughị 1.2 MPa;
5. Jiri temometa na hygrometer lelee okpomoku na iru mmiri. Igwe dị n'èzí na ọnọdụ dị elu kwesịrị ịbụ 15-20 ℃, na ihe owuwu ahụ ekwesịghị ịdị n'okpuru 5 ℃ na n'elu 35 ℃. Mmiri ihu igwe dị mma maka iwu kwesịrị ịdị n'etiti 20% -75%;
6. The kpọmkwem ewu nwere ike rụrụ flexibly dị ka obodo ọnọdụ, ma tupu ọnọdụ nke n'èzí PVC n'ala paving ga-zutere.
Nyocha gbasara ihe kpatara ike ụlọ PVC plastik